အိပ်ခန်းသုံးခန်းနှင့်ကားဂိုဒေါင်နှစ်ထပ်ပါသောတစ်ထပ်အိမ်တစ်လုံး၏အံ့ဖွယ်စီမံကိန်း အနုပညာအာရုံ - အိမ်နှင့်ဥယျာဉ်အတွက်စိတ်ကူးများ
27.03.2020 Posted by: အနုပညာ Senses
အလွန်ကောင်းမွန်သောအတွင်းပိုင်းအပြင်အဆင်ကိုအိပ်ခန်း ၃ ခန်းပါ ၀ င်သောဂိုဒေါင်တစ်ခုပါ ၀ င်သောတစ်ထပ်အိမ်တစ်လုံး၏အလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောစီမံကိန်းကိုအောက်ပါလိုင်းများတွင်ဖော်ပြထားသည်။ စုစုပေါင်း built-up areaရိယာနီးပါး3စတုရန်းမီတာနှင့်နီးပါး 230 စတုရန်းမီတာ၏အသုံးဝင်သောလူနေမှုနေရာ။ မီးဖိုချောင်withရိယာနှင့်တောက်ပပြီးကျယ်ဝန်းသည့် living ည့်ခန်း၊ အိမ်နောက်ဖေးရှိသပ်ရပ်နားသို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခွင့်ရှိသည်။ မီးဖိုချောင်တွင်ဗီရိုရှိပြီးထမင်းစားခန်းသည် lob ည့်ခန်းသို့လမ်းဖွင့်ပေးသောကြောင့်အိမ်ရှိအခြားအခန်းများသို့သွားသောလမ်းဖြစ်သည်။ အိပ်ခန်းသုံးခန်းကိုအိမ်သာနှင့်ရေချိုးခန်းနှစ်ခန်းနှင့်အိမ်နှင့်ကားဂိုဒေါင်အကြားနွေးထွေးသောဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည့်ဝင်ပေါက်ခန်းမနှင့်ဘွိုင်လာအခန်းတံခါးတို့အကြားတွင်သီးသန့်သီးသန့်ရေချိုးခန်းငယ်တစ်လုံးဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ကားဂိုဒေါင်သည်ကြီးမားပြီးမိသားစုကားနှစ်စီးရပ်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။
အိမ်ပတ်လည်ရှိပတ် ၀ န်းကျင်ကိုသန့်ရှင်းသောလိုင်းများဖြင့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်စီစဉ်ထားသည်။ အလင်းမျက်နှာစာသည်ကျောက်တုံးနှင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီးအမှောင်ထုနှင့်ကွဲလွဲနေသည်။ သို့သော်ခြံဝင်းရှိကုန်းပတ်ပတ်လည်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ လှပသောတစ်ထပ်အိမ်၏အလုံးစုံသောရူပါရုံသည်သက်တောင့်သက်သာရှိသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်မတည်ငြိမ်သောစတိုင်လ်ကိုဖန်တီးသည်။
၁။ ဝင်ပေါက် - ၅.၅ m1; စင်္ကြံ + ဗီရို-5.5m²နှင့်အတူ 2. နားခန်း; 19.5.wc - 3m²; စတုတ္ထအခန်းသည် ၁၂.၇ မီတာ;၊ 2.1. ရေချိုး -4m12.7; 5. ရပ်နေ - 6.5m²; 6. ရပ်နေ - 16.1m²; 7. ဗီရို - 17.4m²; ၉။ ရေချိုးခန်း - ၃.၉ မီတာ;၊ ၁၀။ နေ့စဉ်အခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ 8.kitchen - 3.2m²; 9.killer - 3.9m²
၁၃။ ဘွိုင်လာအခန်း ၇.၇ မီတာ၊ 13. နှစ်ဆကားဂိုဒေါင် - 7.7 m14
အဆောက်အ ဦး အမြင့်: 7m²
အဆောက်အ ဦး areaရိယာ: 228m²
ခေါင်မိုးထောင့်: 25 °
အိမ်ဗိသုကာ, ခမ်းနားအိမ်, အိမ်သူအိမ်သား၏ပြည်တွင်းရေးဖြန့်ဖြူး, တစ်ထပ်တိုက်အိမ်,3အိပ်ခန်းပါသောတစ်ထပ်တိုက်အိမ်တစ်အိမ်, အိပ်ခန်းသုံးခန်းပါသောအိမ်များ, အိမ်မှာစိတ်ကူးများ, လှပသောအိမ်, လှပသောအိမ်များနှင့်ဥယျာဉ်များ,3အိပ်ခန်းနှင့်ကားဂိုဒေါင်နှင့်အတူအိမ်, ကျောက်အလှဆင်နှင့်အတူအိမ်သူအိမ်သား, တစ်ထပ်အိမ်တစ်လုံးအတွက်စီမံကိန်းဖြစ်သည်, အိမ်စီမံကိန်း,3အိပ်ခန်းနှင့်အတူအိမ်၏စီမံကိန်း, စတိုင်အိမ်, အိမ်မှာစိတ်ကူးများ, အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း, ပရိဘောဂ, အတွင်းပိုင်းစိတ်ကူးများ, ဒီဇိုင်းစိတ်ကူးများ, ခေတ်သစ်အိမ်, အလှဆင်အတွေးအခေါ်များ, အနုပညာစိတ်ကူးများ
ထပ်ခိုးကြမ်းခင်းနှင့်အလှဆင်ထားသောကျောက်တုံးနှင့်သစ်သားမျက်နှာစာပါ ၀ င်သည့်ဤလှပသောအိမ်သည်ကျယ်ဝန်းသည့်အခန်းသုံးခန်းပါရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းပါ ၀ င်သောလေ့လာမှု၊ မုတ်နှင့် g များပါ ၀ င်သောချစ်စရာကောင်းသောတစ်ထပ်အိမ်တစ်အိမ်၏စီမံကိန်းကိုတင်ပြပါသည်။
ထပ်ခိုးအဆင့်နှင့်အိပ်ခန်း ၄ ခန်းပါသောအိမ်လက်တွေ့စီမံကိန်း
ထပ်ခိုးအာကာသကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အသုံး ၀ င်သောလူနေမှုနေရာကိုတိုးပွားစေသည်။
Volume နှင့် Light တို့သည်ဤအံ့ဖွယ်ကောင်းသောစီမံကိန်းနှစ်ခုအတွက်အဓိကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှစ်ခုဖြစ်သည်။